Akụkọ - Enviro na Michelin kwenyere na usoro nkwekọrịta mmekọrịta
Stockholm-Scandinavian Environmental Systems (Enviro) na Michelin emechaala nkọwa nke ọrụ imegharị mmegharị nke taya, ọnwa isii ka emechara karịa ka atụburu anya ya.
Ndi otu abuo a erutela nkwekorita na isi okwu maka iguzobe ulo oru nkpuru osisi nke taya na nkwekorita na nkwekorita ikike nke ichota usoro ojiji nke Enviro tire pyrolysis technology. Enviro kwupụtara na December 22.
Ulo oru abuo a kwuputara mmekorita ha na April, iji mezue ahia na June, na ebumnuche nke iji ihe omuma nke Enviro weghachite ihe ndi mmadu. Dịka akụkụ nke azụmahịa ahụ, Michelin nwetara 20% osisi na ụlọ ọrụ Sweden.
Dabere na usoro nkwekọrịta a, Michelin nwere ikike ị wuo ụlọ ọrụ ya nke na-adabere na teknụzụ Enviro.
Mgbe ị na-eguzobe ụlọ ọrụ dị otú ahụ, Michelin ga-akwụ Enviro ụgwọ otu oge, kwụghachi ụgwọ na-anaghị akwụghachi ụgwọ, ma kwụọ ụgwọ ụgwọ sitere na pasent ahịa ụlọ ọrụ ahụ.
Dabere na iwu Enviro, nkwekọrịta ikike a ga-adị ire ruo afọ 2035, ụlọ ọrụ a nwekwara ikike ịga n'ihu na-ehiwe osisi ndị ọzọ na ndị ọzọ.
Onye isi oche Enviro Alf Blomqvist kwuru: "N'agbanyeghị ọrịa na-efe efe na igbu oge ndị ọzọ, anyị enweela ike mechaa nkwekọrịta iji mepụta mmekọrịta mmekọrịta na Michelin."
Blomqvist kwuru na nkwekọrịta ahụ bụ "ihe dị oke mkpa" maka Scandinavian Environmental Systems, ọ bụkwa "nnwale dị oke mkpa na teknụzụ anyị."
O kwuru, sị: “N’otu afọ mgbe ọnọdụ ahụ ike ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya mere ka o siere anyị ike‘ ịnakọta ọnụ ’na ịhazi ụzọ anyị ga-esi na-emekọrịta ihe n’ọdịnihu, anyị jisiri ike nweta nkwekọrịta n’ụkpụrụ ndị a bụ́ isi.”
Agbanyeghị na emechiri mkparịta ụka n'ihi Covid, Blomqvist kwuru na igbu oge nyere Michelin na ndị nrụpụta mba ndị ọzọ oge iji nwalee carbon ojii nke Enviro natara.
Nkwekorita a dabere na nkwenye ikpeazụ nke ndị na - ekenye Enviro na nzukọ izugbe pụrụ iche nke a ga - eme na Jenụwarị na - esote afọ.
Nweta akụkọ kachasị ọhụrụ na-emetụta ụlọ ọrụ European roba site na mbipụta akụkọ na ozi ịntanetị, site na akụkọ kacha mkpa iji nyocha nyocha.
@ 2019 European Rubber Journal. ikike niile echekwabara. Kpọtụrụ anyị European Rubber Journal, Crain Communication LTD, EC2V 8EY, 11 Ironmonger Lane, London, UK
Post oge: Jan-16-2021
Ogbe Pyrolysis Osisi, Taya Pyrolysis, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Imefusị rọba, Imefusị Taya Recycling Machine, Plastic imegharị ihe maka iji igwe,